Dimensity 800U bu ihe ohuru Mediatek processor na 5G | Gam akporosis
Dimensity 800U bụ Mediatek ọhụrụ 5G chipset maka etiti igwe na-agbagharị
Mediatek na-eme ihe nke ọma oge ụfọdụ iji gbalịa ịbụ asọmpi siri ike maka Qualcomm, onye kachasị ya na ngalaba semiconductor maka ekwentị, yana kedu ụzọ kacha mma iji mezuo nke a karịa ịnye usoro chipsets dị ike karịa ndị nke ọgbọ ya.
El Njupụta 800U Ọ bụ nzọ ọhụrụ ha na-ekpo ọkụ nke nwere arụmọrụ dị mma, nke ekwuputara maka etiti. Nke a dabara na usoro njikọta kachasị ọhụrụ, nke bụ, ọ dịghị ihe ọzọ na ihe ọ bụla na-erughị, 5G a maara nke ọma na, agbanyeghị na ọ gbasaawanye ụwa niile ma ọ dị naanị n'obodo ụfọdụ na mba ụfọdụ, ọ na-arịwanye elu. ala ma buru amụma ya na 2021 na afọ ndị na-abịa dịka nke ga-anọchi 4G LTE n'ọtụtụ ụwa.
1 Ihe niile banyere Mediatek Dimensity 800U chipset
2 Kedu mgbe onye nhazi ọhụrụ a ga-akụ n'ahịa na ekwentị nke ekwentị ọhụrụ a ga-amalite?
Ihe niile banyere Mediatek Dimensity 800U chipset
Chi ọhụrụ chipset Dimensity 800U bụ isi-asatọ System-on-Chip nke gunyere ogwe aka abuo nke ARM Cortex-A76 na aru oru n’obere elekere nke 2.4 GHz na isi isii Cortex-A55 na aru oru n’iru rue 2.0 GHz, ha abuo elebara anya n’inye onyinye ike karie nke oma, n’adighi ka nke mbu edeputara, nke ga-enye arụmọrụ kachasị elu mgbe achọrọ ya.
Maka eserese na arụmọrụ kacha mma nke egwuregwu na ọdịnaya ọdịnaya, na-abịa na ARM's Mali-G57 GPU ma kwadebere ya na ngalaba iche iche nke ọgụgụ isi (APU), nke kachasị mma nhazi ọrụ ma rụọ ọrụ dị ka ngalaba nhazi.
Mediatek akụkụ 800U
Mkpokọta 5G nke Dimensity 800U na-akwado nkwado abụọ 5G + 5G abụọ SIM, abụọ VoNR (Voice over New Radio), sub-6 GHz NSA / SA network, nke bụ ọkọlọtọ, na nchịkọta nke ndị na-ebu 5G abụọ (2CC 5G-CA). Ọ na-akwado teknụzụ MediaTek 5G UltraSave, onye ọrụ ya bụ ijikwa arụmọrụ modem dabere na gburugburu ebe obibi na ogo nke nnyefe data iji melite ndụ batrị nke ngwaọrụ mkpanaka, nke mere na oriri na chipset a, n'ihe gbasara njikọta, Ọ dị ala karịa nke ndị ọzọ nwere nkwado maka netwọk 5G, ihe dị mma nke enwere ekele, ebe netwọkụ a na-eripịa ihe karịa ndị bu ya ụzọ.
Ngwaọrụ nwere Dimensity 800U nwere ike ịgụnye ihe LPDDR4x RAM (rue 2.133 MHz) na UFS 2.2 nchekwa. SoC na-akwado ngosipụta HD zuru oke + na ọnụọgụ ume 120Hz. Maka ahụmịhe nlele emelitere, ọ na-akwado HDR10 + na MediaTek's MiraVision PQ engine na njikarịcha HDR maka ụdị vidiyo dị iche iche.
IPS nke Mediatek Dimensity 800U na-akwado ihe onyonyo onyogho ruo mkpebi 64 MP na igwefoto azụ anọ. Ihe nhazi ndị ọzọ gụnyere nkwado maka ọtụtụ okwu na-akpalite maka ndị enyemaka olu dị iche iche, mbelata mkpọtụ ụda abụọ, 802.11ac Wi-Fi, na nkwado maka Bluetooth 5.1.
MediaTek ekwuola na Dimensity 800U ezubere iji nyefee 11% na 28% ngwa ngwa CPU na arụmọrụ GPU, karịa Dimensity 720 chipset, nke pụtara ọnwa gara aga dị ka otu n'ime arụmọrụ kachasị mma. Maka ekwentị dị n'etiti.
Iji tinyekwuo aka na gburugburu banyere ntụnyere a, Dimensity 720 ekwuruworị bụ chipset nwere isi asatọ nwere nhazi nke isi Cortex-A76 anọ dị na 2.0 GHz na Cortex-A55 anọ ọzọ na 2.0 GHz. Nke a nwere otu 4 MHz LPDDR2.133X RAm ebe nchekwa na GPU ọ na-etu ọnụ bụ Mali-G75.
Kedu mgbe onye nhazi ọhụrụ a ga-akụ n'ahịa na ekwentị nke ekwentị ọhụrụ a ga-amalite?
Anyi aghaghi ibido site n'ikwu na ekwuputabeghi igwe igwe nwere Dimensity chipsets n'ahịa di na mpụga China, opekata mpe.
Companylọ ọrụ ahụ gosipụtara na nso nso a Ngwaọrụ ndị nwere ike izizi ga-amalite na ahịa dị na mpụga China na nkeji nke atọ nke afọ a. Ka ọ dị ugbu a, ọ nweghị akụkọ gbasara ekwentị mbụ ga-abata na Dimensity 800U ọhụrụ, ọ bụ ya mere anyị ga-eji chere nkwupụta ọkwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Dimensity 800U bụ Mediatek ọhụrụ 5G chipset maka etiti igwe na-agbagharị
Etu esi etinye akaụntụ nkeonwe gị na TikTok
Ekwentị Huawei nwere ọrụ Google ga-akwụsị ịnweta mmelite ọhụrụ